Lapho usuku lokuzalwa, abantu balinde amazwi efudumele izihlobo nabangane, limnandi kangaka lapho oyikhumbulayo ngayo yonke umphefumulo uthanda okungcono futhi omuhle kakhulu. Kulesi sihloko sizofunda ngokuthi singakugwema kanjani ungakwazi ukupheka lokuzalwa imikhonzo intombazane Sonia.
Wishes - amagama eziyigugu kakhulu ukuthi ashiwo ngokusuka enhliziyweni. Siyakuhalalisela icala omuhle amandla behalalisela athwale ukufudumala lwakhe, umusa, ube Ukuvikelwa. Ngakho-ke, khuluma izifiso, iinhlobo zenu nabangani benu azungeze iqhawe usuku ngokunakekela kwakhe, ukwakha isivikelo emzungezile.
Siyakuhalalisela kungenzeka evesini noma temibhalo yephrozi netindzaba, abe ezihlekisayo, uhlamvu bejabule. Ngaphezu kwakho konke, kufanele agcizelele izinzuzo intombazane lokuzalwa, ezwakalisa izifiso wonke umcebo wezwe.
Sihalalisela ingane kufanele lizwakale linemfudumalo ikakhulukazi nangokomzwelo, ngoba ingane idinga ukuvikelwa ezingaphezu kuka omdala. Ilungiselela iziphakamiso on isihloko "Happy Birthday, Sonia!", Wena kufanele inake engu le ntombazane, ubunjalo baso nokuzilibazisa.
Siyakuhalalisela owodwa ngizelwe
Wishes ngoba Sonia oneminyaka kumele kube olunesisa, engcono ukukhetha amagama ngaphandle abukhali, inhlanganisela eyinkimbinkimbi ongwaqa. Izinkondlo noma temibhalo yephrozi netindzaba Kufanele bakhulise umntwana iyona acoustic siyakuhalalisela isithombe, ngoba imishwana ngokwabo oluqondakalayo ngaphezulu kubazali ngaphandle ingane. Ngokwesibonelo, ithokheni eziyinkimbinkimbi "impilo" ungayithola enye by inhlanganisela "ubuhlungu", "ake ukuyibalekela ngaso yonke inhlobo yokugula kanye nezifo", njll ...
Qala siyakuhalalisela, yebo, has amagama "Happy Birthday, Sonia!" La mazwi ngokuyinhloko ukuheha ukuthi ingane ikubheke, ukunikeza isivakashi owawasho. Ngo abafisa ungasebenzisa imishwana enjengethi, "esihlathini-apula", "amehlo bezinto", "uhleko bejabule futhi ugcwele zokuphila" kufanele ishiwo ubuhle umntwana, ngoba kulapho intombazane uyadunyiswa, ngiqiniseka nakakhulu ukuthi ngeke.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ufisa injabulo, injabulo, ukuthula, hhayi ukulimaza, ukujabula, kunalokho kufanele ibe mnene futhi enhle, ayamlalela futhi Naughty, ukudla ngendlela efanele, ukulala kamnandi, nokuningi.
Intombazane ikhula, futhi izifiso kakade athé ukwehluka. Sonia baba yesikole, ayenakho abangane bakhe, ngakho amazwi ngokomzwelo kufanele bacabangele lezi ezintsha emphilweni intombazane lokuzalwa.
Siyakuhalalisela usungaqala ngamezwi athi: "! Lokuzalwa oluhle, Sofia" Kubalulekile ukugcizelela engilakhele isithunzi sobukhulu amantombazane, siphawula impumelelo yayo yokuqala futhi ufisa abangane iqiniso nokuhle. On esikoleni ukukhuluma kangcono ngendlela ejabulisayo futhi ifomu yamahlaya, ngakho siyakuhalalisela kungukuthi yaphenduka notation, isibonelo: ". Ake isifundo kuyoba ukukhanya njengoba feather, nolwazi njengoba okuqinile njengoba itshe" Hlala amazwi ingashintshiwe injabulo, ezempilo, ubuhle, kuhlanganise umphefumulo, isisa nothando intombazane lokuzalwa.
Kubalulekile ngokucophelela ukukhetha amagama congratulation "Happy Birthday, Sonia," ngakho njengoba ungabacasuli noma ubuhlungu noma yimiphi imizwa yokuziphindiselela amantombazane, ngoba iholide, futhi kufanele zibe ku-ke ojabulayo kakhulu.
Ubusha - isikhathi uthando ayenalo ekuqaleni, amaphupho, adventure kanye kubangane abasondelene kakhulu. Sihalalisela ema-amantombazane kufanele kube elikhanyayo, bejabule futhi kancane isihawu.
Kuyadingeka ukuba agcizelele amaphuzu alandelayo:
elikhangayo obusha, ubuhle bemvelo - usuku lokuzalwa izinzuzo zangaphandle;
umusa, ububele, nobungane - imfanelo yangaphakathi;
uthando, isisa nothando inikeza abazali;
indodakazi - injabulo, ngenxa nje yokuthi zikhona kuleli zwe;
injabulo futhi kumnandi noma kukuphi.
Ngaphezu kwalokho, congratulation "lokuzalwa oluhle, Sofia!" kumelwe ufisa amaningi wakhe iphupho futhi balwela nokuqalisa izifiso zabo. Bheka izwe kahle futhi ube nabangane abahle, jabula, ibe nempilo, ukunqoba ubunzima, kuyilapho uqaphele ukuthi kukhona ukwesekwa okuthembekile nokusekelwa njengabazali.
Omama kanye obaba, esikhundleni salokho, kungenzeka ukuthi amagama uhlobo ngokuthi singakanani bayakuthanda dochechka nje uyini. Awudingi ukuba besabe ukwehluka imizwa yazo, ngoba amantombazane akufanele kuphela uzizwe uthando, kodwa futhi ukuzwa wakhe.
Happy Birthday, Sonia! Izinkondlo futhi Eyiqiniso
Siyakuhalalisela kungenziwa ikhishwe noma asesimweni senkondlo nephrozi ebhaliwe, konke kuncike ithalenta siyakuhalalisela. Uma ukhetha okukhethwa kukho zokuqala, babhale inkondlo, yebo, akukhona ngempela ukuthi inkondlo kufanele kube encane, kodwa capacious kakhulu. Isibonelo iziphakamiso olusankondlo:
USonia, othandekayo, Sofia
Ube nosuku lokuzalwa oluhle, ingane!
Wena akhipha injabulo emhlabeni,
Ngenxa yaleso futhi siyakuthanda!
Sifisela wena injabulo kanye nezempilo,
Ake iphupho lifezekile,
Futhi ngokuvamile smile,
Futhi awusoze kube buhlungu.
Ngo temibhalo yephrozi netindzaba congratulation ukwazi ukubona amagama uhlobo ngaphezulu futhi emnene entombazaneni lokuzalwa, ukugcizelela zako, ucacise noma yiziphi izimpumelelo. Kodwa zihlala zinjalo kuqashelwa uthando intombazane. Isibonelo ufisa e temibhalo yephrozi netindzaba: "Usuku lokuzalwa oluhle, Sonia Wena igqamile futhi hlobo, kanye igama lakho elingcwele eyaziwa njengoba isikhathi Rus sidilizwa Sifisela wena ukuhlala okufanayo amnandi, enhle, isabela futhi enobungane Ake amaphupho akho zigcwaliseka, kaningi .. ukumamatheka, jabula zonke mzuzu onke alokhu kuPhila. "
Isu lokubhala siyakuhalalisela esiyingqayizivele
Ukuze ufisa kwaba yokuqala, sikhumbuleke futhi ezithakazelisayo, kudingeka ucabangele amaphuzu alandelayo ngaphambi kwakhiwa:
ukubhala zonke izici ezinhle intombazane lokuzalwa, isithunzi sakhe;
ukwengeza eminye izici ezihambisana ubudala;
Ngifisa injabulo, impilo, impumelelo, ukuchuma, nokunye nokunye..;
beveza ukuqhathanisa ezihlukahlukene ilanga, nokukhanya, entwasahlobo, nokunye. d.
Ukwenza amacebo kusiza ukuqamba ivesi noma lokuzalwa temibhalo yephrozi netindzaba bingelela Sonia.
Schmidt birch. Izici Schmidt birch izinkuni